Zinc Shot / Izinki Sika Wire Shot - China Shanghai Bosun Abrasive
Zinc Shot / Izinki Sika Wire Shot
idubule IIMPAWU zinc wenziwa nenkqubo yomzobo, ukulisika moya etc .. Kwaye zisetyenziselwa deburing kwaye okucoca ezahlukeneyo aluminium ingxubevange, Izinki kufa castings. Ngenxa yokuba amandla awo ezithile ukusondela zentsimbi kunye lukhuni iphantsi, loo deburing iya kwenziwa ngaphandle enxibe iindawo iimveliso '. Kungenjalo ahluka Aluminium esirhabaxa, ukhuseleko ndimkhuphile kinding indawo ephantsi kakhulu eluthulini. Kwaye ke linophawu kwi mhlophe izicacele kwi ...
shot zinc kwenziwa kunye nenkqubo yomzobo, ukulisika moya etc .. Kwaye zisetyenziselwa deburing kwaye okucoca ezahlukeneyo aluminium ingxubevange, zinc kufa castings. Ngenxa yokuba amandla awo ezithile ukusondela zentsimbi kunye lukhuni iphantsi, loo deburing iya kwenziwa ngaphandle enxibe iindawo iimveliso '. Kungenjalo ahluka Aluminium esirhabaxa, ukhuseleko ndimkhuphile kinding indawo ephantsi kakhulu eluthulini. Kwaye ke linophawu kwi mhlophe izicacele phezu iindawo eengoma yomsebenzi.
Izinki wasika wire udubule esirhabaxa inika abezindaba ephantsi kakhulu Rockwell B yokuqaqadeka (20 - 30) alungele ukusetyenziswa deburring castings die.
Shot Izinki iyakwazi lokususa flash .020 "evela castings die.
Izinki wadubula kwakhona kushiya yokulahlwa kwe-zinc kwi into umsebenzi olunika nokumelana.
Shot Izinki ikwasetyenziselwa kubhunyula ipeyinti kunye nomgubo Coatings. Le ukuthamba obethe zinc lusebenza kakhulu ekususeni Ipeyinti ngaphandle kokonakalisa tooling.
inkampani yethu linokuyiqhuba ephothiweyo ibhegi ukupakisha, ibhegi ton ukupakishwa, imithi itreyi ukupakishwa, ukupakisha zeplastiki zokubopha kunye ezifana ngokweemfuno zabathengi
Izinki Sika shot
Sisetyenziswa ngokubanzi metal die ngodongwe; ngqo ukulahlwa; oomatshini hardware lokuvelisa; auto lezixhobo nesivalo namashishini iimveliso iveze zokucoca, derusting, ukuqinisa, smoothing njalo njalo.
Next: Aluminium Shot / Aluminium Sika Wire Shot
ipolishi Izinki Shot
Pure Izinki Wire
Izinki Sika Wire Shot
Izinki Shot nokuphalazeka kwelifu
Izinki Shot xa kuthe kwakho imbabala